Ny mpahay lalàna, Rabenarivo Sahondra : « Tsy tan-dalàna sy tsy mandeha amin’ny laoniny ny eto amintsika » | NewsMada
Ny mpahay lalàna, Rabenarivo Sahondra : « Tsy tan-dalàna sy tsy mandeha amin’ny laoniny ny eto amintsika »
Par Taratra sur 02/03/2017
Vahinin’ny fandaharana « Ambarao » tao amin’ny Alliance 92 FM, omaly, ny mpahay lalàna sady mpikambana eo anivon’nty Sefafi, Rabenarivo Sahondra. Nitondrany ny heviny ny momba ny raharaham-pirenena, indrindra fa ny manodidina ny lalàna.
« Tena tsy tan-dalàna intsony ny eto amintsika fa lasa tanin’ireo matanjaka. Hatrany amin’ny sehatra rehetra ahitana izany avokoa : toekarena sy sosialy… Tsy mandeha amin’ny laoniny intsony. Tsy ny lalàna intsony ny manjaka fa ireo vitsy anisa manampahefana manao ny ataony… Tsy ho amin’ny fampandrosoana”, hoy izy. … Nohitsiny ho anisan’izany ireny fitsaram-bahoaka ireny sy ny tsy fandehanan’ny fitsarana amin’ny tokony ho izy. Tahaka izany koa ny fanadihadiana eny anivon’ny zandary sy ny polisy. Tsy manantena intsony ny rariny sy ny hitsiny any amin’ny fitsarana ny vahoaka ka mahatonga ireny fitsaram-bahoaka ireny, araka ny nambarany. Tsy vitan’izany koa anefa fa tsy misy intsony ny fifampitokisana eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka satria tsy mijery ny vahoaka izy ireo. “Tokony ho mpikarakara, manana vina sy mpitarika anefa izy ireo. Lasa manjakazaka, mibaikobaiko, mampiasa herisetra. Toe-draharaha mampatahotra izany. Lavina tanteraka ny fitrasaram-bahoaka nefa tokony hanontany tena ny mpitondra”, hoy ihany izy.
Tokony hitovy lenta avokoa ny kandidà
Noresahiny koa ny momba ny lalàna. Anisan’izany ny lalàm-pifidianana ka nilazany fa tokony hitovy lenta avokoa ny kandidà rehetra. Tsy amin’ny fifidianana ihany anefa izany resaka lalàna izany fa hatramin’ny tsenam-panjakana sy amin’ny sehatra hafa koa, araka ny fanamafisany.
Momba ny fiarahamonim-pirenena, notsiahiviny fa samy manana ny anjara asany izy ireo. Ahitana karazany maro. Lehibe na kely fa eo koa ireo midina ifotony. “Ho anay Sefafi manokana, manao fanambarana sy miantso ny tokony hijerena ny tsy mety… Tsy afaka hanao ny rehetra ny vondrona iray fa tsy maintsy miparitaka”, hoy izy. Nanteriny ary nekeny fa tsy miteny firy ireo manampahaizana sy ny avara-pianarana amin’ny sehatry fiainam- pirenena. “Afaka mandinika sy manana tolokevitra amin’ny toekarena sy sosialy ary ny fanabeazana anefa izy ireo. Tokony hanao ny tandrify azy avy ny tsirairay… Ekena fa efa mety kivy izy ireo. Tsy misy mihaino sy tsy misy vokany nefa ilaina amin’ny demokrasia ny fomba fijery samihafa”, hoy ihany ity mpahay lalàna ity.
Tsy manana finiavana hampihatra lalàna ny mpitondra
Nanteriny fa manana lalàna betsaka isika ary tsara. Na lany andro izy ireny na tsy misy finiavana politika hampihatra izany: ohatra ny lalàna momba ny demokrasia, ny Fitsarana natao ho an’ireo mpitonda (HCJ). “Tsy manana finiavana hampihatra izany ny mpitondra. Na mety manelingelina azy ireo izany”, hoy izy.
Momba ireo lalàna samihafa kosa, nambarany fa tokony ho hita ao avokoa ny hevitry ny rehetra, indrindra fa ny teknisianina. “Tokony havoaka ho an’ny daholobe sy ampahafantarina izany fa tsy kobonina na afenimpenina, ahafahan’ny parlemantera mifidy izany lalàna izany. Tokony hosokafana ny adihevitra fa tsy an’ny vitsy anisa, mialoha ny handaniana ny lalàna…”, hoy ity mpikamban’ny Sefafi ity.